Imishado ehleliwe eyayisetshenziselwa ukujwayela phakathi kwabaholi beBasotho kanye nezingane zezinduna, ukuzalwa kanye nobuhlobo bomndeni kubalulekile ukulawula ubudlelwane bezenhlalakahle nezomthetho. Uyise womfana uvame ukuphakanyiswa ngokusondela kubazali bentombazane. Uma beyamukela, wacela i-calabash yamanzi. Uma abazali bakhe bevuma, lo mfana, nabangani abambalwa, bavakashela ngokusemthethweni intombazane. Uma evuma umdlalo, wamnika isikhala (moqhaka). Ngokuvamile wayemnike ukudla ayewenqaba, funa kuthiwa 'weza ukudla hhayi uthando'. Nakuba lo mbhangqwana kungenzeka ukuthi awuzange uhlangane ngaphambili, bavame ukuvuma lokho okwenziwe, kodwa ezikhathini zangaphambili kwakudingeka bahambe nomshado ukuthi bayakuthanda yini noma cha. Muva nje ukukhululeka okukhulu kuye kwaqalwa - namhlanje ukhetho olulodwa luyisimiso futhi abesifazane abaningi abangashadile baba omama.
Esikhathini esidlule, umshado wasungulwa ngokudluliswa kobohali (ubutyebi bomakoti) kusuka emkhayeni womyeni womyeni kumakoti. Izinkokhelo zezinkomo neminye imfuyo ibonisa ukuthi izingane zizoba yindodana kababa nohlobo lwababa, hhayi umama. Inani le-bohali lalinganiselwe ezinkampanini ezingu-20, ihhashi elilodwa, nezimvu eziyi-10 noma izimbuzi, kepha kwakungakhokhiwe ngokugcwele. Emva kokudluliselwa kwezinkomo ezifika ku-10, izinkokhelo ezengeziwe zasiza ukusebenzisana namaqembu amabili ngezibopho zokuvumelanisa kanye nobungane.
Esikhathini esidlule umshado wawuvame ukuqhutshwa ngemva nje kokuba umshado uhlelwe. Kuze kube yileso sikhathi, lo mbhangqwana awungafanele abe nobulili noma aphile ndawonye. Namuhla imishado eminingi iyenzeka ngemuva kokuhlehlisa noma uma indoda kanye nabangane bakhe bethatha intombazane yakhe ekhethiweyo (bamba) bese bemyisa endlini yakhe, lapho emukelwa khona njengokungathi umshado usuyenzile. Isilwane singase sihlatshwe ngisho nokuphawula lesi senzakalo, kuyilapho i-trousseau yomakoti ithunyelwa emva kwayo. Ukudluliswa kwezimoto zokuqala, izinkomo eziyisithupha noma ukulingana kwemali, ukuvuma ukuthi umkhwenyana uthathe ubuhlobo bobulili nomkakhe, kodwa akusho ukuthi unelungelo lokubiza izingane zakhe njengamalungu omndeni wakhe; ngoba lokhu okungenani izinkomo ezingu-10 (noma okulingana nayo imali) kudingeka zidluliselwe futhi zivunyelwe esidlangalaleni.
Namuhla umbhangqwana omusha namanje awulindele ukuba nomuzi wakhe. Umakoti uhlala nabazali bomyeni. Upheka, uyasiza ngemisebenzi yasekhaya, futhi usebenza emasimini, ngaso sonke isikhathi ukulalela imithetho yokuhlonipha (hlonipho) ngoyisezala okubandakanya ukungasho igama lakhe noma igama elizwakalayo elifana nalo. Esikhathini esedlule indoda ingafaka isicelo somhlaba nesakhiwo sokwakha ekuqaleni kwenkathi yokuqala emva komshado, futhi kancane kancane ukuzimela komndeni omusha ekutheni isakhiwo semindeni sithuthukisiwe. Ukucindezela emhlabeni namuhla kusho ukuthi angalinda isikhathi eside kunonyaka. Kodwa-ke, abashadikazi abaningi balwisana nalokhu, futhi bafuna imindeni yabo masinyane emshadweni.